Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, January 28, 2011 Links to this post
ဦးကိုကို (ခ) ချစ်လွင် အသက် (၅၈) နှစ် (KO KO Beauty Saloon) ပိုင်ရှင်သည် ၂၄.၁.၂၀၁၁ (တနင်္လာ) နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ၂၆.၁.၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများ၊ ဦးကိုကိုအား ချစ်ခင်ကြသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ အနုပညာသမားများနှင့် တပည့် တပန်းများဖြင့် စည်ကားစွာ မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဦးကိုကိုအား လွမ်ှးဆွတ် ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုများကား အဆုံးမသတ်နိုင်တော့ချေ။
တစ်နေကွယ် . . . သေနယ်သို့ တစ်ခါကူး
တားမရဘူး . . . ။
အကိုကြီး ကိုကျော်သူအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။..
ကျောင်းကြီး မပြီးခင်.. (ကျားပေါက်)
ကျားပေါက်ရဲ့ ကျောင်းကြီးမပြီးခင်.. Download လုပ်ချင်ရင်... http://www.mediafire.com/?emmc7jbrni4zqc5
Labels: နာရေးကူညီမှုအသင်း, သီချင်း
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, January 27, 2011 Links to this post
ဘဘဦးတင်ဦး၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပြောတဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့် (သတင်းရုပ်သံ၊ မှတ်တမ်း)
DVB ရုပ်သံမှတ်တမ်းပါ... ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ပြုစုတင်ပြပေးတဲ့ ကိုအေးမင်းစိုးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
လောင်ပြန်ပြီ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမီးတဲ့... (သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ)
ယနေ့ညနေ ၃း၀၀ခန်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာတော့မီးတွေ စပျက်ပါတယ်။ ပျက်ပြီးသိပ်မကြာပါဘူး ညနေ၄း၁၀ မှာ ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မီးစလန့်ပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး အေရုံက ဦးလေးကြီး ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံ အထည်ဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ခိုး ကနေမီးခိုးတွေ တလူလူနဲ့ လွင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မီးလန့်တဲ့အချိန်မှာ လျှပ်စစ် မီးမလာပါဘူး။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဈေးအရမ်းမီးသတ်များ၊ စည်ပင်ရဲများရဲ့ဝိုင်းဝန်း ငြိမ်းသတ်မှုကြောင့် မီးဟာ ၄း၄၇ အချိန်မှာ ဆက်လက် လောင်မြိုက်မှု မရှိပဲ ငြိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မီးပျက်တာနဲ့ မီးလောင်မှု စတင်တာဟာ ဘယ်သူတွေ အပေါ်မှာ တာဝန်အရှိဆုံးလည်း ဆိုတာ အများ ပြည်သူအပေါင်းတို့ စဉ်းစားပေး တော်မူကြပါခင်ဗျား။
မီးမလာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေဟာ မီးလောင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အချက်တွေပါ..။ မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်မီးကတော့ ကြပ်ပြေးနဲ့ သတင်းစာထဲမှာ ထိန်ထိန်ညီးနေတာပါပဲ..။ သတင်းစာထဲမှာ မီးလာနေတာ (၂၃)နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ်...။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ မသင်္ကာလို့ ရဲခဏခဏ စစ်ခံရတဲ့သူတွေကို အပျော်အပြက်နဲ့ ရဲကြိုက်တဲ့ရုပ်လို့ စကြ နောက်ကြပါတယ်..။ ထူးဆန်းတာက မြန်မာပြည်မှာ ခုတစ်လော မီးတွေလောင်တာ ဈေးတွေအဓိက ဖြစ်နေတာ တွေ့နေရတော့ မီးကြိုက်တဲ့ဈေးလို့ ပြောမလား ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကများ ကြိုက်နေမလားပဲ..။ ဒါမှမဟုတ် ဈေးဆိုတာ အင်္ဂါနံဆိုတော့ တမင်အဂါင်္နံတွေပဲ အနှောင့်အယှက် ပေးခံနေရသလားပဲ..။ နောက်ဒီဈေး ကလည်း တစ်လောက နာမည်ကြီးလေ.. အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ပဲ ထောက်ခံလိုက်ကြတာ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လာရင် ဆုံးရှုံးရတာ ပြည်သူတွေပါပဲ..။ ပြည်သူတွေပဲ ဒုက္ခရောက်ကြတာပါ..။ မြန်မာပြည်သူတွေ ရန်သူမျိုး ငါးပါးနှိပ်စက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ...။
အမေ့အိမ်မှ ဂုဏ်ယူစရာ ကြယ်ပွင့်လေးများ
ဒီနေ့ အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်းက ဂုဏ်ယူစရာ / ၀မ်းသာစရာ ဆုပေးပွဲလေးတစ်ခုရဲ့ မြင်ကွင်းပါ ။
SEIKO (5) မိန်းမပတ်နာရီလေးတစ်လုံးကောက်ရလို့ ဆရာမထံလာအပ်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် (တတိယတန်းမှ မောင်အောင်သီဟနိုင် နှင့် မစုစုလှိုင် ) ကို စာရိတ္တ စံပြဆု ချီးမြင့်တဲ့ အခမ်းအနားလေးပါ။
အမေ့အိမ်က အမေ့ရင်သွေးလေးတွေဟာ လူမချမ်းသာပေမယ့် စာရိတ္တချမ်းသာတဲ့ကလေးတွေမို့ တိုင်း ပြည်ရဲ့ သားကောင်းရတနာလေးတွေကို တို့လူကြီးတွေက တန်ဘိုးထားပြီး သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို မြှင့်တင်ပေးကြပါစို့ ။
နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ စေတနာရှင်တွေရဲ့  ရန်ပုံငွေ လှူဒါန်းနေတဲ့ပုံတွေကိုလည်း
သာဓုခေါ်နိုင်ရန် တင် ပေးလိုက်ပါတယ် ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ညွန်ကြားချက်နဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာ ၁၃ ရပ်ကွက် မေခလမ်းရှိ အမေ့အိမ်အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်းမှ ဓာတ်ပုံတွေပါ.. ဓာတ်ပုံများအတွက် ကိုငယ်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
အနာဂတ်ရဲ့ အမေ့အိမ်ကျောင်းက ရင်သွေးငယ်တွေအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ...
တို့ရဲ့  ရင်သွေးတွေ တို့ရဲ့  သားသမီးတွေ တိုင်းပြည်ရဲ့  ရတနာလေးတွေ ရှိနေတယ် ။
သူတို့လေးတွေကို ကူညီကြပါ ။ စောင့်ရှောက်ကြပါ ။ အသိအမှတ်ပြုကြပါ ။
ဘယ်သူတွေအသိအမှတ် မပြုချင်နေပါစေ ၊ တို့တတွေက စပြီး အသိအမှတ်ပြုကြရအောင်။ တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရတနာလေးတွေဖြစ်လာအောင် ၀ိုင်းဝန်းပြီး
ဖော်ပြခွင့်ပြုတဲ့ ကိုငယ်အား ကျေးဇူး အထူးတင်ပါသည်..။ (ဒီမိုဝေယံ)
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Wednesday, January 26, 2011 Links to this post
မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို သိစေချင်ပြီး သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို မေးချင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီးအထူးကု ဆေးရုံကြီးတစ်ခုရဲ့ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ ဒီဆေးရုံမှာ လူနာတွေကို ရောဂါကုသပေးနေတဲ့ သမားတော်ကြီးများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်တွေ့ပြီမေးရမှာ...။ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ကျွန်မ သိချင်လွန်းတဲ့ အချက်တွေကို ဒီကနေဘဲမေးလိုက်ရတာပါ။ ဒီဆေးရုံရဲ့ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ အထူးကုသမားတော်ကြီးများ မိမိတို့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီး ယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့ ကိုယ့်အသက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပ်ထားတဲ့ လူနာနဲ့ လူနာရှင်တွေအပေါ် ဘယ်လိုများသတ်မှတ်ပြီး ဘယ်လိုများ သဘောထားပါသလဲ? ကျွန်မဘာလို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးရသလဲဆိုရင် ကျွန်မအမျိုးသားဟာ သူယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့ သူ့အသက်ကို အပ်နှံထားတဲ့ အဆစ်အမြစ်သမားတော်၊ ရင်ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ သူ့အဆုတ်ကို ကုသပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးသမားတော်၊ သွေးရောဂါကုသမားတော်ကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးအပ်လိုက်ရတဲ့ နှလုံးအထူးကု သမားတော်ကြီး လေးယောက်စလုံးရဲ့ ဥပက္ခာပြု လျစ်လျူရှုခြင်းကိုခံရပြီး (၂၉.၁၁.၂၀၁၀) တနလာင်္နေ့ ညနေ(၄:၃၀) မှာ အဲ့ဒီဆေးရုံရဲ့ (ICU) ဆိုတဲ့အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာဘဲ အသက်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသားဆုံးတာ ဒီနေ့ဆိုရင် တစ်လကျော် ရှိသွားပေမဲ့ သူဆုံးခါနီး နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နဲ့ (၂၉)ရက်နေ့တွေမှာ.. ဒီဆေးရုံပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ခါးသီးစွာ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်လိုမှ ဖြေဖျောက် မရနိုင်သေးဘူးဆိုတာ..။ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မရူးမတတ် သိချင်နေတဲ့အချက်က ကျွန်မအမျိုးသားဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ လူ့လောကကြီးကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့တာလဲ ဆိုတာ သူမဆုံးခင်အချိန်ကလေးအတွင်းမှာ... သူ့ကို ကုသပေးနေကြတဲ့ သမားတော်ကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်လောက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်လာခဲ့ပြီး သူဟာဘာကြောင့် ကုလို့မရနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာကို ပြောပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ နည်းနည်းလေးတော့ ဖြေသိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုကျွန်မအမျိုးသားဆုံးခါနီးမှာ ဆေးရုံပြန်တက်ရတာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ၊ ပထမအကြိမ်က အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ထိ ရက်နှစ်ဆယ်တိတိ ကြာခဲ့ပါတယ် ၊ ဒီအတောအတွင်းမှာ သူ့တို့ကုသပေးနေတဲ့ သမားတော်ကြီးသုံးယောက်ပါ ၊အဆစ်အမြစ်သမားတော် ... ရင်ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးသမားတော်နဲ့ သွေးအထူးကုသမားတော်ကြီးတွေပါ ၊ ကျွန်မ အမျိုးသားမှာ သွေးလေးဘက်နာရောဂါ ရှိတဲ့အတွက် အဆစ်အမြစ်သမားတော်နဲ့ ကုသနေတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အခုဆေးရုံတတ်ရမဲ့ အခြေအနေကြောင့် သူနဲ့သွားပြတဲ့ အချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ လူနာရှင်တွေဘက်က ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ဆေးရုံကအစ ကိုယ်ကုချင်တဲ့သမားတော်အထိ ဘာတစ်ခုမှ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီဆေးရုံမှာ မတင်ချင်လို့ တခြားဆေးရုံမှာ တင်ဖို့ပြောပေမဲ့ အဆစ်အမြစ် သမားတော်က လက်မခံလို့ သူတို့တင်ခိုင်းတဲ့ ဆေးရုံမှာဘဲတင်ခဲ့ရပြီး... သူတို့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ သူတို့အချင်းချင်း ချိတ်ပေးတဲ့ သမားတော်တွေနဲ့သာ ကုခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ့်လူနာဘာဖြစ်မှန်း မသိရဘဲ..။ အဆုတ်သမားတော်နဲ့ သွေးသမားတော်တို့ ရောက်လာမှ အဆုတ်နဲ့သွေးထဲမှာ ပြဿနာရှိမှန်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာနဲ့ ကျွန်မတို့ လူနာရှင်တွေဆိုပြီ အရမ်းကိုယုံကြည်အားကိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံမှာ ရက်နှစ်ဆယ်ကြာပြီး နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ ဆရာဝန်သုံးယောက်စလုံးက လူနာသက်အန္တာရယ် မရှိတော့လို့ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တာကို ယုံကြည်မိပြီး လူနာကို အိမ်ပြန်ခေါ်ခဲ့မိတာ... ကျွန်မတို့ရဲ့ အမှားလားလို့ ဖြေမရနိုင်အောင် နောင်တရနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံရမှာစိုးလို့ လူနာကိုဆေးရုံက မဆင်းစေချင်သေးလို့ လူနာရဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ တီဘီဖြစ်နေလို့ တီဘီဆေးကို ခြောက်လသောက်ရမယ်ဆိုပြီး ကုသပေးနေတဲ့ ရင်ခေါင်းသမားတော်ထံကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်ပြီး လူနာကိုဆေးရုံမှာ ပိုစိတ်ချရတဲ့အချိန်ထိ ထားချင်လို့ လူနာဆေးရုံက မဆင်းနိုင်အောင် ပြောပေးဖို့ တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြောခဲ့တဲ့ လူနာရှင်ကျွန်မရဲ့ စကားကို လုံးဝလစ်လျူရှုပြီး လူနာကိုဆေးရုံက ဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့ရက်က ပြောခဲ့တဲ့ သမားတော်သုံးယောက်စလုံးရဲ့ အသက်အန္တာရယ် မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ စကာသာမှန်ခဲ့ရင် လူနာဟာဆေးရုံပေါ်မှာ.. ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေထိ နေခဲ့ရမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ထိမြန်မြန် ကျွန်မတို့ကို စွန့်ခွာသွားရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပြီး ကျွန်မတမြေ့မြေ့နဲ့ခံစားနေရတာဟာ ဘယ်သူကြောင့်ပါလဲ ? ဆေးရုံကဆင်းပြီ ဆယ့်ခုနှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိ ကြားထဲမှာ အဆုတ်ရဲ့ အခြေအနေကို တခါမှ ပြန်မစစ်ဆေးတာဟာ လူနာရဲ့ရောဂါအခြေအနေက သိပ်ကိုစိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီလို့ သတ်မှတ်ထားလို့လား ? ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ ကုသချက်ဟာ အရမ်း မှန်ကန်နေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု လွန်ကဲထားတာလား ? လူနာဟာတီဘီရောဂါ အမှန်တကယ် မဟုတ်ဘဲ တီဘီဆေးကိုသောက်နေရလို့ အခုလောက် မြန်မြန်အခြေအနေ ဆိုးရွားသွားတာလား? တီဘီပိုးမတွေ့ပေမဲ့ ရွေးစရာလမ်းမရှိလို့ တီဘီဆေးကိုဘဲ သောက်ရမယ်လို့ပြောသွားတဲ့ ဒီသမားတော်ရဲ့ စကားကို ကျွန်မအခုထိ ကြားယောင်နေတုန်းပါဘဲ။ ဒါကြောင့်မို့လူနာကို ဒုတိယအကြိမ် သူမကိုယ်တိုင် ဆေးရုံ ပြန်တတ်ခိုင်းခဲ့ပေးမဲ့ လူနာအသက် ထွက်သွားတဲ့ အချိန်ထိတချက်မှ လှည့်မကြည့်ဘဲ... ပစ်ထားခဲ့တာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? ဘယ်သူမှာတာဝန် အရှိဆုံးလဲဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင်လဲသိနေမှာပါ ။ ကျွန်မရဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ သက်ဆိုင်ရာ သမားတော်မှာ အဖြေတစ်ခုခုတော့ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကဆင်းပြီ တစ်ပတ်အကြာ (၁၈.၁၁.၂၀၁၀)နေ့မှာ အဆစ်အမြစ် သမားတော်နဲ့ သွေးသမားတော်တို့ ချိန်းထားတဲ့ အတွက်သွားပြန်ပြခဲ့ပါတယ် ၊အဲ့ဒီအချိန်ထိ သမားတော် နှစ်ယောက်စလုံးက လူနာမှာစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ လုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။
လူနာကလဲ အိမ်မှာ စိုးရိမ်ရလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာမပြတော့ ကျွန်မတို့လဲ သိပ်မစိုးရိမ်ခဲ့ပါဘူး ၊ ဒီလိုဆရာဝန်တွေကိုဘဲ ယုံကြည် ထားမိတာဟာလဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ အမှားလားလို့ တွေးပြီး ဖြေမရနိုင်အောင် ခံစားနေရပါတယ်။ ကျွန်မအခု နောက်ဆုံး ပြောပြချင်တာကတော့ လူနာဆေးရုံကဆင်းပြီး (၁၇)ရက်အကြာမှ အဆုတ်သမားတော်က ပြန်ပြဖို့ချိန်းတဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက် နေ့လည် (၁:၃၀) ကနေ လူနာဆုံးတဲ့ နိုဝင်ဘာ (၂၉) ရက်ညနေ (၄:၃၀) အချိန်ထိ ခါးသီးစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါဘဲ ၊ (၂၈) ရက် နေ့လည် (၁:၃၀) ဆေးရုံရောက်မှ လူနာရဲ့ အဆုတ်ကို ဓာတ်မှန်ပြန်ရိုက်ပြီး အဆုတ်သမားတော်ကို ပြတော့မှ အဆုတ်ရဲ့အခြေအနေက အရမ်းစိုးရိမ်ရလို့ ဆေးရုံပြန်တင်ခိုင်းပါတယ်။ နှလုံးအခြေအနေလဲ မကောင်းလို့ဆိုပြီး နှလုံးအထူးကု သမားတော်ကို လာကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်မတို့ အရေးပေါ်ခန်းမှာဘဲ ရှိနေသေးတာပါ ၊ ညနေ (၅:၀၀) လောက်မှ လေးထပ်မှာ အထူးခန်းရလို့ လူနာကို အခန်းထဲ ရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ လူနာဟာ (၁၈:၀၀) နာရီလောက် နေခဲ့ရပေမဲ့ နှလုံးသမားတော် အပါအ၀င်ကျွန်မတို့ လူနာကို ကုပေးဖို့ယုံကြည် အားကိုးစွာ အပ်နှံထားတဲ့ သမားတော်လေးယောက်စလုံး အရိပ်တောင်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ On Call ခေါ်ပေးခိုင်းလဲ တစ်ယောက်မှ ရောက်မလာကြပါဘူး၊ လူနာဟာ တညလုံး မျက်လုံးကြောင်တောင်နဲ့ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်နေတာကို ဘာဖြစ်လို့ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲလို့ လာကြည့်တဲ့ (MO)တွေကို မေးကြည့်တော့ အဆုတ်ဝေဒနာရှင်တွေဟာ ဒီလိုဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလဲ ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှ မကြုံဘူးတော့ သူတို့ပြောတာကိုဘဲ ယုံကြည်နေခဲ့မိပါတယ်။
နောက်ဒီဆေးရုံက တော်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီးခေါ်ပေးတဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ်ရှိ မှော်ဘီမှာ နေတဲ့အမျိုးသား သူနာပြုက မနက် (၅:၀၀) မှာထပြီး လူနာကို အတင်းထထိုင်ခိုင်း ရေပတ် အတင်းတိုက်ပေး လူနာကိုအတင်း လှုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့လူနာရှင်က တားတာလဲမရပါဘူး ၊ ဒီအချိန်မှာ လူနာက စကားတောင် ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအခြေအနေကို တစ်ညလုံးတွေ့မြင်နေရက်နဲ့ သူနာပြုတစ်ယောက် လုပ်နေပြီး ပြင်းထန်စွာ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပုံမျိုး လုပ်သင့်ပါရဲ့လား ? ဒီဆေးရုံရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆုံးဖြတ်ပေးကြပါ။
လူနာဟာ ဆေးရုံရောက်ပြီး နောက်နေ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက် မနက် (၁၁:၀၀) နာရီ အရောက်မှာ လူနာရဲ့ အရမ်းစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဘယ်သမားတော်ကိုမှ အားကိုးမျှော်လင့်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး။ ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီဆေးရုံရဲ့ (ICU)လို့ခေါ်တဲ့ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ကို ပို့ပြီး အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ တာဝန်ကျဆရာဝန်ရဲ့ လက်ထဲကိုဘဲ ကိုယ့်လူနာကို အပ်လိုက်ရပါတယ် ၊ (ICU) ရောက်မှ အဲဒီက ဆရာဝန်တွေပြောလို့ ကိုယ့်လူနာဟာ တစ်ညလုံး မျက်လုံးကြောင်တောင် ဖြစ်နေတာဟာ... သတိလစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတာပါ ၊ လူနာဟာ တစ်ညလုံး သတိလစ်လိုက် ပြန်လည်လာလိုက်.. ဖြစ်နေတာပါ ၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ခြောက်နှစ်လုံးလုံး ဆေးပညာတွေ သင်ယူခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေ တကယ်ဘဲ မသိတာလား ? ကျွန်မတို့ လူနာရှင်ကိုဘာဖြစ်လို့ အမှန်တိုင်း မပြောပေးနိုင်တာလဲ? (ICU) ရောက်တော့ လူနာကို တပ်ပေးထားတဲ့ စက်တစ်လုံးက မမှန်ဘူးတဲ့ ပျက်နေတာတဲ့။ ဒါသူတို့ ဆရာဝန်အချင်းချင်း ပြောလို့ ကျွန်မတို့ ကြားပြီး တော်တော်ကို တုန်လှုပ်သွားမိပါတယ်။ (ICU)ဆိုတာ လူနာတွေ အရမ်းစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပိုက်ဆံအများကြီး ပေးမှထားရတဲ့နေရာပါ။ ဒီလိုနေရာမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား ? လူနာဟာ (ICU) ရောက်ပြီး ငါးနာရီကျော်ကြာမှ အသက်ထွက်သွားတာပါ။ အဲဒီ့ အချိန်ထိ ဘယ်သမားတော်တစ်ယောက်မှ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မလာကြတာလဲ ? လူနာဟာ ကုလို့ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို.. ကြိုသိနေခဲ့ရင်တောင် လူနာရှင်တွေကို တစ်ချက်လောက်တော့ မျက်နှာပြပြီး နှစ်သိမ့် ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ကျွန်မတို့က သမားတော်တွေကို အခမဲ့ ကုခိုင်းတာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံနဲ့ သမားတော်တွေ တောင်းသလောက်ပေးပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ကိုယ့်လူနာကို အပ်ခဲ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့များ လူနာနဲ့လူနာရှင်တွေကို ဒီလောက်ထိ မထေမဲ့မြင်ပြုပြီး လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ကြတာလဲ?
လူနာဟာ ကုမရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေရင်တောင် ကျွန်မတို့ လူနာရှင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသင့်တာပေါ့ ။ အခု သမားတော်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ်ကုသပေးနေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ပစ်ထားခဲ့တာ။ သိပ်ရက်စက်ရာ ကျနေတယ်လို့များ မတွေးမိဘူးလား? ကျွန်မအခု ဒီကနေ မေးနေတာကို သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သမားတော်တွေ သိကြမှာပါ ၊ ကျွန်မဒီကနေ တင်ပြတာတွေက.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက် နစ်နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး ၊ လူနာရှင်တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို သက်ဆိုင်သူတွေ သိစေချင်ရုံပါ။ ကျွန်မ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက သမားတော်ကြီးများအားလုံး မိမိတို့ကို အားကိုးယုံကြည်ပြီး ကိုယ့်အသက်ကို အပ်ထားတဲ့လူနာတွေကို အချိန်နည်းနည်းပေးပြီ ဂရုစိုက် အလေးထားပေးမယ်ဆိုရင် လူနာတွေကိုယ်စား ကျွန်မသမားတော်ကြီး အားလုံးကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ ။
ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အထူးကုဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ သမားတော်များအားလုံး လူနာနဲ့ လူနာရှင်တွေအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားပေးနိုင်ကြပါစေ။
အခြေခံပညာကျောင်းအချို့တွင် ကျောင်းသားများအား မုန့်ဖိုးများစွာမပေးရန် နှိုးဆော်လာ..
အခြေခံပညာကျောင်းအချို့တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား မုန့်ဖိုးများစွာမပေးရန် နှိုးဆော်ထားရှိထားကြောင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ထိုသို့ နှိုးဆော်ရခြင်း၏အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လက်ထဲတွင် ငွေကြေးများစွာရှိပါက ပညာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုများ မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကလေးများ ငွေကြေးအများအပြား ကျောင်းသို့ယူလာခြင်းနှင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကို "တချို့ ကလေး တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် လက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သောင်းကျော် ကျောင်းကို ယူလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံဘယ်ကရတာလဲလို့ မေးရင် မိဘတွေက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ကလေးရဲ့လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိလာမှာစိုးလို့ ဒီလို နှိုးဆော်ထားတာပါ။ ကျောင်းကနေ အိမ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်တာတွေ၊ ဂိမ်းကစားတာတွေလုပ်မှာ စိုးလို့ပါ။ လူငယ်တွေက ယောက်ျား လေးရော၊ မိန်းကလေးတွေပါအ၀တ် အစားနဲ့ အလှအပအတွက်ကို အချိန် ပေးပြီးပြုလုပ်လာကြတယ်။ လိုအပ်တဲ့မုန့်ဖိုးထက် ပိုပေးထားရင် တလွဲအသုံးချမှာစိုးလို့ မိဘတွေကို နှိုးဆော်ထားတာပါ"ဟု ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
တချို့ ကလေး တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် လက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သောင်းကျော် ကျောင်းကို ယူလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံဘယ်ကရတာလဲလို့ မေးရင် မိဘတွေက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ကလေးရဲ့လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိလာမှာစိုးလို့ ဒီလို နှိုးဆော်ထားတာပါ
အဆိုပါ နှိုးဆော်မှုကို ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်နှိုးဆော်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာကျောင်းအချို့၌ သာ နှိုးဆော်မှုရှိကြောင်း သိရသည်။
"ဒီနှိုးဆော်မှုလေးက တခြား ကျောင်းတွေမှာ ပြုလုပ်လား၊ မပြု လုပ်ဘူးလားဆိုတာတော့ မပြော တတ်ဘူး။ တချို့စည်းကမ်းလေးတွေ ကြတော့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ မတူညီနိုင်ပါဘူး"ဟု ဆရာကြီးက ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
"သားသမီးတွေကို ပညာရေးမှာ ထူးချွန်စေချင်လို့ မြို့ထဲကျောင်းမှာထားတာပါ။ ပညာရေးမှာလည်း ထူးချွန်ကြပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကျောင်းစာကိုပြိုင်ဆိုင်ကြတာတွေ အပြင် တခြားပြိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေလည်း ရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက တစ်နေ့ကိုမုန့်ဖိုး များများရလို့ သမီးကမုန့်ဖိုး တိုးတောင်းတာတွေ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေကအစ ပြိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက် အနေနဲ့တော့ တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်း ပေးနေရတာပါပဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကုန်ကျစရိတ်က ကျောင်းသွားတာနဲ့ ကျူရှင်သွားတာပေါင်းလိုက်ရင် သောင်းဂဏန်း ကပ်နေပါပြီ။ ဒါတောင် တခြားကုန်ကျစရိတ်တွေ မပါသေးဘူး" ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ အထက်တန်း ကျောင်းတစ်ကျောင်း တွင် ကလေးနှစ်ဦး၏မိခင်တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦးက "ဆရာမတို့ ကျောင်းမှာတော့ ကလေးတွေက မုန့်ဖိုးမရတာ များပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း အရမ်းကွာခြားပါတယ်"ဟု NEW ELEVEN ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြပါရှိပါသည်..။
ယခင်ဦးပိုင် ယခုမောင်ပိုင် အကြောင်း တစေ့တစောင်း...
မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ဦးပိုင်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးရဲ့ ချမ်းသာသမျှ ဆိုပြီး GRW မှ အတွင်းသိ ပေးပို့လာတာကို အားလုံးသိအောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်...
ကိုဒီမို ဘလော့(ဂ်)မှာ ဦးပိုင်အကြောင်းပါလို့ ဦးပိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး အကြောင်းနဲ့ အောက်ခြေ စစ်သည်တွေရဲ့ ဘဝတွေအကြောင်း ရေးသားပေးပို့လိုက်ရပါတယ်။ ဦးပိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး လောက်မပြောနဲ ဦးပိုင်က အစွယ်အပွားတွေ တောင်ချမ်းသာတာ။ ဦးတင်အေးအိမ်မှာ သူတို့လက်ထဲမှာ သိန်း ၃ သောင်း အထက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့တစ်သိန်း သုံးတယ်ထား တစ်နှစ် သိန်း၃၆၀နဲ့ နှစ်တစ်ရာကျော် ထိုင်စားလို့ရတယ်..။ သိန်း၃သောင်းကျော်နော်... စဉ်းစားသာကြည့် သူတို့ကို နိုင်ငံတော်က ပေးထားတဲ့ ကားတင်ပဲ သိန်း၂ထောင်ကျော်တန်တယ်..။ သူတို့စီးဖို့ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုး လိုင်စင်ဆို သူတို့ပဲရတာ။ လန်ခရုဆာလို အဖြူတွေ. ဦးတင်အေးက သား၂ ယောက် သမီးတစ်ယောက်လေ...။ မိန်းမနာမည်က ဒေါ်ကြည်ကြည်အုန်း ..။ သားအငယ် ဥက္ကာအေးက အရင်တိုင်မှုး PSO ခု တော့ ဗိုလ်မှုးပေါ့..။ နောက်အကိုကြီးက ဇော်မင်းအေး သူလည်း စီးပွားရေးသမားပဲ..။ ဒါပေမယ့် နာမည်မထွက်ဘူး ရွှေမန်းသားတွေလိုတော့...။ အဲ့တော့ တွက်ကြည့်ပေါ့..။ .. ကား၊ စိန်၊ အိမ်.. သိန်း၃သောင်း အထက်ရှိတယ်။ ဦးတင်အေးတို့ အဆင့်ဆိုရင်... နှစ်တရာ စားမကုန်ဘူး.. အခုခေတ် အလုပ်လုပ်တဲ့ သာမန် သူဋ္ဌေးတွေတောင် သိန်းကို ထောင်ဂဏန်းတော့ ရှိတယ်လေ။ နည်းနည်းပိုချမ်းသာရင် သောင်းဂဏန်းရှိမယ်..။ သူတို့က အလကားရတဲ့ငွေတွေက သိန်းကို သိန်းချင်းထပ်နေတာ..။
အိမ်ကနေန စတွက်ကြည့်ရအောင် ဦးတင်အေးတို့နေတဲ့ ရန်ကုန်က မီးမပြတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရွာ အကျယ် ပေ၁၀၀ပတ်လည်.. အိမ်တွေရဲ့ ဈေးက သိန်း ၅ထောင် လောက်တော့ရှိတယ်။ ကဲကား တွက်ကြည့်ရအောင် နိုင်ငံတော်က ပေးထားတဲ့ လောလောဆယ် ပြန်ရောင်းလို့တော့ မရတဲ့ လန်ခရုဆာလို အဖြူကားက အနည်းဆုံး သိန်း ၂၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်..။ သူတို့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ကားတွေ ကြည့်ရအောင် ဇူဇူကီးလေ. လက်ရှိ အနည်းဆုံး ၂၀၀နဲ့တွက် အိမ်တိုင်းရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တွေရတဲ့ ပရာဒို သိန်း ၂ ထောင်နဲ့တွက် ဆလွန်းအကောင်းစား သိန်း ၁ထောင်တန်ရှိတယ်။ အနည်းဆုံး ၄စီးနဲ့ တွက်လိုက်တယ်.......။ နေ့စဉ် အန်တီကြီးတွေ ၀တ်သောအရာများ နားကပ် သိန်း ၄၀၀ လက်စွပ်သိန်း ၂၀၀ ဆွဲသီး သိန်း ၇၀ လက်ကောက် သိန်း ၅၀ ဒါနေ့စဉ် ၀တ်တာကို တွက်ပြတာနော်...။ ဒါလက်ရှိမြင်ရတာကို တွက်ပြတာ..။ မမြင်ရတဲ့ အတွင်းပစ္စည်း ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်..။
ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်ကို ဖမ်းတုန်းက ရွှေချောင်းတွေ ဒေါ်လာတွေ ဖမ်းမိတာ အားလုံးအသိပဲလေ..။ လက်ရှိ နအဖခေတ်မှာ သာမန် စီးပွားရေးလုပ်နေပါပီဆိုတဲ့ ကားစီးနေတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်မှာ သိန်း ၁ထောင်နဲ့ပဲတွက်ပြီး သူတို့မှာ ရှိတာတွေကို တွက်ကြည့်တာလေ...။ သူရရွှေမန်းတို့ ဆိုရင်တော့ သိန်းကို သိန်းချင်းထပ်နေတာ..။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ချမ်းသာတာကို ကြည့်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေရော ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေပါ ချမ်းသာချင်ပြန်ရော.. အဲ့တော့ ၀န်ထမ်းတွေထဲက ပေးနိုင်သူကို နေရာပေးရော..။ စားရတဲ့ နေရာပေးတော့ မတရားတာလုပ်ရော ..၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ ၀န်ကြီးထက် ဒုဝန်ကြီးတွေ ကပိုဆိုးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ် ကောင်းတော့မလည်း ဒီနိုင်ငံ။
ကဲမြင်သလောက် ပြောကြရအောင် ပြီးခဲတဲ့နှစ် တောင်ကြီး သင်္ကြန်မှာ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဋ္ဌာနချုပ် တိုင်း မဏ္ဍပ်က အစည်ဆုံးပေါ့ ..။ ရန်ကုန်က အဆိုတော်တွေ နဲစည်လို့ကားလို့ အဆိုတော်တွေ အလကားတော့ မဆိုကြပါဘူး...။ အာဇာနည် ၃ရက် သိန်း၁၀၀နီးပါး ရှင်းရတယ်..။ ၃ရက်ကို သိန်း (၃၀) နီးပါး အဆိုတော် တွေလည်းပါတယ်..။ တောင်ကြီးလိုနေရာမှာ သကြီန်အတွက်ကို သိန်း ၅၀၀ကနေ ၁၀၀၀အတွင်း သုံးတယ်.။ ဘယ်ကပိုက်ဆံလည်း အဲ့ဒါ ...စပွန်ဆာတွေ ဆီကဆိုရင် လည်း စပွန်ဆာဘယ်သူက အလကားပေးမလည်း။ ခုထိတောင်ကြီးဘက်မှာ သစ်ခိုးထုတ်တဲ့ လမ်းတွေ ဘိန်းလမ်းကြောင်းတွေက ရှိနေတုန်းပဲ။
ကဲ အဲ့လို့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို စစ်တပ်ထဲမှာ ဖိနပ် တောင် သားသမီးကို မဆင်နိုင်တဲ့ စစ်သားတွေ မိသားစုတွေ.... ဆေးကုဖို့ မရှိလို့ ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးကြတဲံ့မိသားစုတွေ၊ ကျောင်းမတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းထွက် ထင်းခွေရတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ အများအတွက် .. လိုအပ်တာတွေ မသုံးပဲ တပျော်တပါး မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးနေကြတာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ စစ်သားမိန်းမတွေ မလောက်ငှလို့ ညဘက်ထွက် ညဉ့်ငှက်လုပ်နေကြသူတွေ အများကြီးပဲ။ တစ်ခါက တပ်ထဲကို စာရင်းစစ် လာမယ်ပြောလို့ စာရင်းစစ်တွေအတွက် လိုအပ်ရင် ကျွန်မတို့ကိုပဲ ခေါ်ပါလို့ ပေါ်တင်ပြောတဲ့ စစ်သားမိန်းမလေး တွေကိုမြင်ဘူးလို့ပါ..။
ဒါကလောလောဆယ် သိသမျှ ပါးပါးလေး ရေးသားလိုက်တာပါ..။ ဒီထက်ဆိုးတာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်..။ အခုမကြာခင် တရားမဝင်စားနေတာကနေ နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် တရားဝင် ဥပဒေနဲ့ စားနိုင်တော့မယ်လေ..။ လွှတ်တော်ထဲ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်ချင်တဲ့ အတိုက်အခံတွေလည်း ပြည်သူ့အတွက်ပဲ ဖြစ်လာမလား ကိုဒီမိုရေးသလို အများလို အနည်းစားခြေပဲ ဖြစ်ပြီး အလိုတူ အလိုပါ ကြံရာပါတွေပဲ ဖြစ်မလား ဆိုတာ အားလုံး စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ကိုဒီမိုရေ...နောက်အချိန်ရရင် ထပ်ပြီးပို့ပေး လိုက်ပါဦးမယ်..။
GRW အတွင်းသိ... ရဲ့ ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ စံအိမ်တော်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း.... ပြန်ဖတ်ချင်ရင်.. http://www.demowaiyan.co.cc/2010/07/generals-and-their-relatives-watchers.html
အကယ်ဒမီဆုကို ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အနုပညာရှင်ခြောက်ဦး ပေါ်ထွက်ခဲ့သော ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပ..
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အကယ်ဒမီဆုကို ပထမဆုံးရရှိသည့် အနုပညာရှင်ခြောက်ဦး ပေါ်ထွက်ခဲ့သည့် အခမ်းအနားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု(အကယ်ဒမီ)ပေးပွဲသည် (၅၄)ကြိမ်မြောက် အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သော ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲများ၌ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ဆုပေးပွဲ အပြီးတွင်မူ ပရိသတ် မျှော်မှန်းထားကြသည့် အနုပညာရှင်များနှင့် ဆုရခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ ထပ်တူနီးပါး တူညီခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိခဲ့သည့် ဆုပေးပွဲဟု ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် ဆုပေးပွဲသည် အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း အခြားသောဆုများဖြစ်သည့် ဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ ဇာတ်ညွှန်းဆု၊ တည်းဖြတ်ဆု၊ ဓာတ်ပုံဆု၊ အသံဆု၊ တေးဂီတဆု၊ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုနှင့် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုများကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ပေးအပ်ခဲ့ရာတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ရုံတင်ပြသခဲ့သော ဇာတ်ကား ၁၆ ကားအနက် ဇာတ်ကား လေးကားက ဆုများကို အသီးသီး ရရှိသွားပြီး ထိုဇာတ်ကားများမှာ ဇော်က ကနေသည်၊ မိုးညအိပ်မက်မြူ၊ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ၊ အတိတ်ရဲ့အရိပ်နှင့် ကျောက်စက်ရေ ဇာတ်ကားတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုနှစ် ဆုပေးပွဲတွင် ဆုပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဆုပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော ဒုတိယမြောက် ဆုပေးပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွက် ချီးမြှင့်ခဲ့သော မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင်လည်း အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားဖြင့် စင်ရော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ဇာတ်ကားဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆုသည် စင်ရော်ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် တတိယမြောက် ရရှိခဲ့သော ထူးချွန်ဆု ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်က တစ်ပြည်သူမရွှေထား ဇာတ်ကားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က လျှို့ဝှက်သောနှင်း ဇာတ်ကားဖြင့် လည်းကောင်း ဆုများ ရရှိထားခဲ့ပါသည်။
မီးပွား (ဇော်က ကနေသည်)
အကယ်ဒမီဆုများနှင့် အကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်ခဲ့သူ ဒါရိုက်တာမီးပွားက ဇော်ကကနေသည် ဇာတ်ကားဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ဒါရိုက်တာဆုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာမီးပွားသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်က အရိပ်ဇာတ်ကားဖြင့် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က တစ်ခါကဧရာဝတီညများ ဇာတ်ကားဖြင့် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က မင်္ဂလာပါ ဇာတ်ကားဖြင့် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကြိုးတန်း ဇာတ်ကားဖြင့် တစ်ကြိမ် အကယ်ဒမီ ဒါရိုက်တာဆုကို ရရှိရန် အကြိမ်ကြိမ် ခန့်မှန်းခံရပြီး လွဲချော်ခဲ့ရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ဒါရိုက်တာဆုကို ရရှိရန်အတွက် ဒါရိုက်တာမီးပွားသည် မိုးညအိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျင်၊ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်တို့နှင့် အပြိုင် ရေပန်းစားခဲ့ရာမှ ဆုရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိရန် ပရိသတ်များက ခန့်မှန်းခဲ့ကြပြီး ရေပန်းစားခဲ့သည်နှင့်အညီ အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို နေတိုးက ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နေတိုးသည် မိုးညအိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကားဖြင့် အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ နေတိုးသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွင်း ရုံတင်ပြသခဲ့သည့် ဇာတ်ကား ၁၆ ကားအနက် ခြောက်ကားတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားခဲ့ပြီး ယင်း ဇာတ်ကားများအနက် ဇော်က ကနေသည်၊ မိုးညအိပ်မက်မြူ၊ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ စသည့် ဇာတ်ကားတို့ဖြင့် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိရန် ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သော အနုပညာရှင်များ ဆုရရှိရန် ရေပန်းစားခဲ့သည့် မိုးညအိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကားဖြင့် စိုးပြည့်သဇင်က အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စိုးပြည့်သဇင်သည် ယင်းဇာတ်ကားတွင် ကိုမြင့်ဝေနှင့် ချစ်ကြိုးနွယ်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ထားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ထူးချွန်ဆုသည် စိုးပြည့်သဇင် အတွက် ပထမဆုံးဆွတ်ခူးခဲ့သည့် ဆု ဖြစ်ပါသည်။ စိုးပြည့်သဇင်သည် ယင်းဇာတ်ကား၌ပင် အငြိမ့်မင်းသမီး ချစ်သက်နွယ် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော သင်ဇာဝင့်ကျော်နှင့်အပြိုင် အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆုအတွက် ရေပန်းစားခဲ့ရာမှ ဆုရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲအတွက် ဇာတ်ကားဆု အပါအ၀င် အခြားသော ဆုများရရှိရန် ရေပန်းစားခဲ့သည့် ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားဖြင့် မြင့်ဦးဦးမြင့်က ဇာတ်ညွှန်းဆုကို ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ထူးချွန်ဆုသည် မြင့်ဦးဦးမြင့် အတွက် ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သည့် ထူးချွန်ဆုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြင့်ဦးဦးမြင့်သည် ဇော်က ကနေသည် ဇာတ်ကားကို ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သူ နေ၀င်းမြင့်၊ မိုးညအိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကားကို ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်၊ ကျောက်စက်ရေ ဇာတ်ကားကို ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့သူ ဆုသြချယ်တို့နှင့် အပြိုင် ဆုရရှိရန် ရေပန်းစားခဲ့ရာမှ ဇာတ်ညွှန်းဆုကို ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတ်ညွှန်းဆုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲများတွင် ဆုပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက်ကိုမူ မြင့်ဦးဦးမြင့်က ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဓိရာမိုရ် (ဇော်က ကနေသည်)
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရှင် တေးဂီတဆုကို ဇော်က ကနေသည် ဇာတ်ကားဖြင့် ဓိရာမိုရ်က ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓိရာမိုရ်သည် ဇော်က ကနေသည် ဇာတ်ကားနှင့် မိုးညအိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကားတို့တွင် နောက်ခံ တေးဂီတများ ဖန်တီးပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ယင်းဇာတ်ကားများဖြင့်ပင် ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု ရရှိရန် ရေပန်းစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ရရှိသော ထူးချွန်ဆုသည် ဓိရာမိုရ်အတွက် ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အကယ်ဒမီဆု ဖြစ်ပါသည်။
ဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) (ကျောက်စက်ရေ)
ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ)သည် ကျောက်စက်ရေ ဇာတ်ကားဖြင့် ရုပ်ရှင် တည်းဖြတ်ဆုကို ငါးကြိမ်မြောက် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ)သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က လျှို့ဝှက်သောနှင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြင့်မိုရ်ထက်ကသရဖူ အစရှိသော ဇာတ်ကားများဖြင့် ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆုများကို ရရှိထားခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု တစ်ခုဖြစ်သော အသံဆုကို ဆန်းဦးနှင့်အဖွဲ့က အတိတ်ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကားဖြင့် ရရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆုသည် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သည့် အတိတ်ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကား အတွက် ပွဲဦးထွက် အနေဖြင့် ရရှိသွားခဲ့သော ဆု ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဆုသည် အတိတ်ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကားအတွက် ဒုတိယမြောက် ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့သည့် ထူးချွန်ဆု တစ်ဆု ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် ကိုကိုဌေးနှင့်အတူ သုံးပေါင်နှင့် Martin Fucts တို့က ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှုများကို တွဲဖက် လုပ် ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုကိုဌေးအတွက်မူ ယခုရရှိသောဆုသည် ငါးကြိမ်မြောက် ရရှိခဲ့သော ထူးချွန်ဆု ဖြစ်ပါသည်။ ကိုကိုဌေးသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က မသုဓမ္မစာရီ၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မြင့်မြတ်နှလုံးသား၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကောင်းကင်ထက်ကပန်းတစ်ပွင့်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် လျှို့ဝှက်သောနှင်း အစရှိသော ဇာတ်ကားများဖြင့် ထူးချွန်ဆုများ ရရှိထားပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု (အကယ်ဒမီ) ရရှိသူများ
ဇာတ်ကားဆု - ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ
ဒါရိုက်တာဆု - မီးပွား(ဇော်က ကနေသည်)
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - နေတိုး (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စိုးပြည့်သဇင် (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
ဇာတ်ညွှန်းဆု - မြင့်ဦးဦးမြင့် (ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ)
တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) (ကျောက်စက်ရေ)
ဓာတ်ပုံဆု - ကိုကိုဌေးနှင့်အဖွဲ့ (အတိတ်ရဲ့အရိပ်)
အသံဆု - ဆန်းဦးနှင့်အဖွဲ့ (အတိတ်ရဲ့အရိပ်)
တေးဂီတဆု - ဓီရာမိုရ် (ဇော်က ကနေသည်)
ရင်းမြစ် New Eleven ဂျာနယ်....
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, January 24, 2011 Links to this post
အမေရိကန်နိုင်ငံ Oregon ပြည်နယ် Portland မြို့မှ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ HIV- AIDS ဝေဒနာရှင်များအား ကူညီရေး ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲအတွက် ပေးပို့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း...
ဗီဒီယို ဖိုင်ပေးပို့ပေးတဲ့ ကိုနစ်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
အောက်ကပုံတွေကတော့ အမေစု ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၇)နေ့က အမေစု တောင်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးတုန်းက မတင်လိုက်ရပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဂရုဏာ အပြည့် ကြင်နာမှု အပြည့်နဲ့ နွေးထွေးမှု အပြည့်နဲ့ ပန်းတွေဝေပေးနေတဲ့ အမေ့ပုံပါ..
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Sunday, January 23, 2011 Links to this post
ပြည်တွင်းပြည်ပ လူမှုကွန်ယက်များ၏ စုပေါင်းအလှူဒါနပွဲ သတင်း ဓါတ်ပုံ..
ပြည်တွင်းပြည်ပ လူမှုကွန်ယက်များ၏ စုပေါင်းအလှူဒါနပွဲ သတင်း ဓါတ်ပုံ